မင်္ဂလာပါ Gazette နဲ့ စပ်မိစပ်စပ်ရာအတွေးစု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » မင်္ဂလာပါ Gazette နဲ့ စပ်မိစပ်စပ်ရာအတွေးစု
မင်္ဂလာပါ Gazette နဲ့ စပ်မိစပ်စပ်ရာအတွေးစု
Posted by Zaw Thant on Jul 11, 2013 in Politics, Issues, Think Different | 67 comments
..မင်္ဂလာပါ Mandalay Gazette အဖွဲ့သားများခင်ဗျား… မင်္ဂလာပါ လို့သာ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရတယ် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ Foreigner ကြီးစကားမပီမသနဲ့ Min Galar Par လို့ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်.. မြန်မာအချင်းချင်း အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာမှ သိပ်မရှိတော့ပဲ.. ထားပါတော့ တခြားလို formal နှုတ်ဆက်စရာမှ မရှိတာ..
Gazette ကို အမတစ်ယောက်ဖိတ်ခေါ်လို့ရောက်လာပြီး အခု လတ်တလောက ရေးထားတဲ့ Post တစ်ပုဒ်နဲ့ စဖွင့်ချင်ပါတယ်.. ဟို ရောက် လိုက် ဒီ ရောက် လိုက် ရေးထားတာမိုလို့ နည်းနည်းတော့ သည်းခံဖတ်ကြပေါ့လေ.. အမြင်မတူတာ၊ တူတာရှိရင်လို့ ဝင်ဆွေးနွေးကြရင်လည်း အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
.. ကိစ္စတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်လာပြီဆိုပါတော့.. အကြောင်းရင်းရှာကြရင် ဘယ်လိုရှာကြလဲ.. အဆင်အပြေတာကတော့ အနီးစပ်ဆုံး၊ အလွယ်ဆုံး တစ်ခုခုနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်လိုက်ကြတာပဲ.. ကိုယ့်စိတ်ထဲက ဘက်လိုက်မှုလေးလဲနည်းနည်းတော့ပါတာပေါ့.. အပြစ်တင်စရာဆို ကိုယ်သောက်မြင်အကပ်ဆုံးလူကြောင့်.. ချီကျုးစရာဆို ကိုယ်အကြည်ညိုဆုံးလူကြောင့် ပေါ့.. အခြေခံအရတော့ အတူတူပါပဲ.. တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို Linear (တဆက်တည်း၊ တိုက်ရိုက်) သဘောနဲ့ ဆက်စပ်လိုက်တာ.. Multifactorial (အကြောင်းတရားစုံ၊ ဘက်စုံ) သဘောစဉ်းစားဖို့ကျတော့ ခေါင်းပူတယ်၊ စိတ်ရှုပ်တယ်ပေါ့.. အားအားယားယားရှိတဲ့လူတွေပဲ စဉ်းစားနိုင်တယ်..
တော်သေးတာက အဲ့လိုအားအားယားယားစဉ်းစားနိုင်တဲ့ လူတွေကြောင့်ပဲ ကိစ္စတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုသိလာရတာ ဆိုရမယ်.. ဆေးပညာမှာဆိုရင်ပဲ ဟိုးအရင်က ဒီရောဂါဖြစ်တာ ဒီရောဂါပိုး ကြောင့် ဆိုပြီး Linear စဉ်းစားရာကနေ Multifactorial ပုံစံပြောင်းစဉ်းစားလာတယ်.. ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆို ရောဂါပိုးရဲ့ ပြင်းအား၊ လူရဲ့ခုခံအား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ဘာညာပေါ့.. မြန်မာလိုဆိုတော့ ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အဟာရ ဆိုပြီး လုံးချလိုက်လဲ ရတာပဲ.. ထားပါတော့ ပြောချင်တာက Multifactorial ပုံစံ စဉ်းစားတော့ ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မြင်လာတာကို ပြောချင်တာပါ..
ခက်တာက အဲလို စဉ်းစားပုံမျိုးကို ကိုယ့် Profession နဲ့ ပါတ်သက်လာရင်စဉ်းစားတတ်တယ်.. သူများ Profession အတွက်ဆို မစဉ်းစားတတ်၊ မစဉ်းစားချင်တော့ဘူး.. ကိုယ့်ချစ်တဲ့လူကို ကာကွယ်ဖို့ ဆိုစဉ်းစားတတ်တယ် (ဒါက ဒီလိုကြောင့်ပါ၊ ဟိုဟာကိုလည်းထဲ့ စဉ်းစားရသေးတယ် စသည့်).. ကိုယ်သောက်မြင်ကပ်တဲ့လူကို အပြစ်တင်ဖို့ကျတော့ မစဉ်းစားဖြစ်တော့ဘူး..
လက်တွေ ဥပမာ အနေနဲ့ ကျန်းမားရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းကိုသာကြည့်.. ဆေးရုံတွေမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ညံတယ်၊ လူနာသေဆုံးတယ် စတာတွေဖြစ်ရင် အလွယ်ဆုံး အပြစ်တင်ခံရတာ ဆရာဝန်တွေ။ ဆရာဝန်တွေ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ.. လွယ်လွယ် Linear သဘော (ဆရာဝန်ညံလို့ ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုညံတယ် လို့) စဉ်းစားတာရယ်၊ နဂိုကတည်းက သောက်မြင်ကပ်နေတာ (ဘက်လိုက်မှု) တွေပါတာပေါ့။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတော့ကျ Multifactorial သဘောပါလာပြီ.. အစိုးရပံပိုးမူနည်းတာ၊ လစာ အချိန် မလုံလောက်တာ၊ ဆေးပစ္စည်းမပြည်စုံတာ၊ လူနာရဲ့ရောဂါ အခြေအနေကိုက ဆိုးတာ စသည်စသည်တို့ ပါလာပါတယ်.. ဆရာဝန်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ် ပရော်ဖန်ရှင် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပိုနားလည်နိုင်တာဖြစ်သလို ကိုယ့် ပရော်ဖန်ရှင်ကို ကိုယ်ကာကွယ်ချင်တာလဲ ပါပါတယ်.. ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တဖက်လူက Linear သဘောနဲ့ ဒါဟာဒါကြောင့်လို့ စဉ်းစားနေသရွေ့တော့ ပြဿနာပြေလည်အုံးမယ့်သဘောမရှိ..
အဲ.. အလို့မျိုး ကိုယ့် ပရော်ဖန်ရှင်ကို ကိုယ်နားလည်နိုင်၊ ကာကွယ်ချင်ပေမယ့် သူများ ပရော်ဖန်ရှင်ကိုကျတော့ နားမလည်ချင်တောဘူး.. ဥပမာ အမြန်လမ်းမှာ ကားတွေ ခဏ ခဏမှောက်တဲ့ ကိစ္စ.. ဘယ်သူ့ကို အရင်ဆုံး အပြစ်တင်ချင်လဲဆိုတော့ လမ်းဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ.. ဒင်းတို့တွေ အသုံးမကျလို့ ဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေ.. သူတို့လည်း နည်းပညာ အခက်အခဲ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အခက်အခဲ များရှိမလား၊ မောင်းတဲ့လူတွေ စည်းကမ်းရှိဖို့ပိုလိုမလား စသည်ဖြင့် မစဉ်းစားဖြစ်ဘူး.. သူတို့ အိပ်ကပ်ထဲ ရောက်သွားလို့ လမ်းက အသုံးမကျဖြစ်တာ အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာ လို့ စဉ်းစားတာပိုများပါတယ်.. (တခြား ပွဲတိုင်းကျော်တွေဖြစ်တဲ့ MPT၊ EPC၊ မော်တော်ပီကယ်၊ စတာတွေကို အပြစ်တင်ရင်လည်း ဒီသဘောပဲရှိတယ်).. ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဆို Multifactorial သဘော စဉ်းစားတတ်ပြီး သူများကိစ္စ ဆို အဲ့လိုမစဉ်းစား မသုံးသပ်တတ်တာကို ယှဉ်ပြထားတာပါ..
နောက် ဘာသာရေးကိစ္စ.. “ဒီဘာသာဝင်” တွေကြောင့် အခုပြဿနာတွေ ပေါ်လာတာ လို့ စဉ်းစားတာက Linear သဘော.. ဒါကို Multifactorial သဘောစဉ်းစားရင် လူမျိုးရေးပြဿနာ၊ ယဉ်ကျေးမှုပြဿနာ၊ နယ်စပ်ပြဿနာ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူဝင်မှုဥပဒေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ၊ စီးပွားရေးပြဿနာ၊ အမုန်းတရား… စတာ စတာတွေ အကုန်ထဲ့ စဉ်းစားပါမှရမယ်.. Linear သဘော စဉ်းစားလို့ ဒီဘာသာဝင်တွေ ကြောင့် ဒီပြဿနာ ဖြစ်တယ်လို့ စဉ်းစားရင် ဖြေရှင်းမယ့် နည်းလမ်းကလည်း Linear သဘောပဲထွက်လာပါလိမ်မယ်.. ကလေးနှစ်ယောက် ဥပဒေ တို့၊ အမျိုးစောင့် ဥပဒေ တို့ စတာ တွေက ဒီသဘောပါပဲ.. ဒီလူတွေကြောင့် ဒီပြဿနာ ဖြစ်တယ်.. အဲ့တော့ ဒီ ဥပဒေ ထုတ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေ သွားပြီ လို့စဉ်းစားတာပါ.. မှားတယ် လို့တော့ ဆိုလို့မရပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ပြည့်စုံမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. အဲ့တော့ ပြဿနာကို တကယ် မဖြေရှင်းနိုင်တာ၊ ပြဿနာပုံပြောင်းသွားတာ၊ တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပါလာတာ တွေရှိနိုင်ပါတယ်.. ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ဘက်စုံ ထောင့်စုံ Multifactorial အရအဖြေထုတ်မှပဲ ဘာသာရေး ပြဿနာ၊ လူမှုစီးပွားရေးပြဿနာ၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာ ကွဲကွဲပြားပြားမြင်ပြီး ဖြေရှင်းလို့ရမှာပါ.. ဥပဒေထုတ်မှာဆိုလဲ အဲလို့ ဘက်စုံထောင့်စုံ မြင်ပြီးမှ စဉ်းစားထားတဲ့ ဥပဒေ ဆို ကန့်ကွက်မဲ့လူ ရှိလှမယ် မထင်ပါဘူး.. ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ ပေါင်းပြီး သေချာအဖြေရှာကြည့်ရင်တော့ ရမှာပါ.. တဖက်နဲ့တဖက် ထိုင်ဆဲ နေကြရင်တော့ အလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး..
နောက်နိုင်ငံရေးမှာလည်း ဒီအတိုင်း Linear သဘော စဉ်းစားတာ အကျင့်ပါလာပါတယ်.. ဟိုအရင်ကတည်းက တစ်ခုခု မကောင်းတာဖြစ်တိုင်း အပြစ်တင်လို့ ရတာက စစ်အစိုးရမကောင်းလို့ ဆိုတာမျိုး.. ဒါလည်းမမှားပါဘူး.. ခေါင်မိုးမလုံတော့ တစ်အိမ်လုံးရွှဲတာကိုး.. ခေါင်းမိုးပဲပြောရမှာပဲ.. ဒါပေမယ့် အခု အချိန်ကျတော့ နည်းနည်းပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စဉ်းစားကာမှ တော်ကာကျမယ်.. ဒီအစိုးရကို ကြည့်မရတာနဲ့ပဲ တစ်ခုခု အပြစ်တင်စရာရှိတိုင်း ဦးသိန်းစိန်ကြောင့် လက်ရှိအစိုးရကြောင့် လို့ပြော၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီအစိုးရကို ကိုယ်ထောက်ခံချင်တာနဲ့ပဲ ကောင်းတာ တစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်း ဦးသိန်းစိန်ကြီးတော်လို့ ဆိုပြီးစဉ်းစားနေရင် ပြည့်စုံမယ်မထင်ဘူး.. လောလောဆယ် ကိုယ့်တိုင်းပြည် အခြေအနေဖြစ်တဲ့ Democratization တို့၊ အဲ့မှာပါဝင်တဲ့ Liberalization အဆင့် Transition အဆင့် တွေလျှောက်ပြောနေရင် တံတွေးစင် ကုန်မစိုးလို့ မပြောတော့ဘူး.. အဓိကဆိုချင်တာက အာဏာရှင်လည်းမဟုတ် ဒီမိုအစိုးရလည်းမမည်သေးတဲ့ ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်း အစိုးရရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို သဘောပေါက်နိုင်ရင်တော့ အဲ့ဒီ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို Multifactorial သဘောစဉ်းစားပေးလို့ရတတ်ပါတယ်..
ဥပမာ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မြစ်စုံကိစ္စ.. ပြည်သူ့ဆန္ဒ ကို လိုက်နာတဲ့ အတွက် ဒါပြည်သူ့ဆန္ဒကိုအလေးထားတဲ့ ဦးသိန်းစိန် လို့စဉ်းစားရင် Linear သဘောဆောင်ပါတယ် (မပြည့်စုံပါဘူး).. ဒါမှမဟုတ် ဦးသိန်းစိန်ဟာ အရင် ဘောင်းဘီဝတ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းသာဖြစ်လို့ လူကောင်းဖြစ်စရာမရှိဘူး၊ အမှတ်ယူချင်တာ သက်သက် လုပ်တာလို့ မကောင်းမြင်နေရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူး.. Multifactorial အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ချင်ရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ ရထားတဲ့ အကန့်အသတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဖိအား၊ ပြည်သူရဲ့ဖိအား၊ နိုင်ငံတကာက ပေးမယ့် အမှတ် စသည်တို့ ကြားက အခြေအနေအကောင်းဆုံး တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တာပဲ.. အပြစ်မြင်ဖို့၊ ချစ်ခင်ဖို့ စတာတွေထက် သူ့အနေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ ပေါက်ဖော်မျက်နှက်ထက် ပြည်သူ့မျက်နှာ လိုချင်တာပိုတယ် စသည်ဖြင့်မှန်းလို့တော့ရတယ်.. ဒါပေမယ့် လွတ်တော်ထဲက ၂၅% လျှော့ဖို့တို့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ စတာတွေကျတော့ ဝေ့ဝိုက်နေတာတွေ့ရတယ်.. ပြည်သူမျက်နှာထက် ပိုဂရုစိုက်မယ့်လူ ရှိသေးတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူရတာပဲ.. ဒါလည်း Transition ကာလအစိုးရရဲ့ သဘောတရားဖြစ်တာတော့ သဘောပေါက်ရမှာပဲ.
နောက်ထပ်ဥပမာပေးရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ Multi factors ထည့်စဉ်းစားလေ့ရှိတာတွေရတယ်(လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဒီမိုတန်ဖိုး၊ ရေရှည်အကျိုးအပြစ် စသည့်).. လက်ပန်းတောင်းကိစ္စ၊ ဘင်္ဂလီကိစ္စ စသည်ဖြင့်ပေါ့.. ဒါကိုသဘောမပေါက်သူတွေအတွက်တော့ ငါတို့ဖက်မလိုက်ဘူး၊ သူများဖက်လိုက်တယ် မွတ်ဒေါင်း ဘာညာ ပေါက်ကွဲကြရော.. ကိုယ်လိုချင်တာကို “ရော့..အင့်” လို့ ပေးနိုင်မှ သဘောကျပြီး တခြားဟာတွေလာမပြောနဲ့ ဆိုတဲ့သဘော.. ဒီမိုကရေစီမှာ အများဆန္ဒအရေးကြီးပေမယ့် လက်ခုပ်သံနောက်လိုက်မယ့်၊ ပေါ်ပင် အများကြိုက်နောက်လိုက်မယ့် ခေါင်းဆောင်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ရာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်မယ့်လူ ခွဲခြားအကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်..
အဲလိုခွဲခြားအကဲဖြတ်နိုင်သူတွေကျတော့ လက်ရှိအချိန်အထိ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်.. တော်သေးတယ်ပြောရမယ်.. ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက အဲ့ဒီထောက်ခံသူတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ Multifactorial သဘော စဉ်းစားလေ့မရှိပဲ Linear သဘောပဲအားသန်နေတာတွေရတယ်.. ပြည်သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံအားပေး >> ဒေါ်စုက (သမ္မတဖြစ်ပြီး) တိုင်းပြည်ကို ကောင်းအောင်လုပ် >> တိုင်ပြည်ကကောင်းသွား… ဒီလိုသဘောရှိကြပါတယ်.. ထုံးစံအတိုင်း မှားတော့မမှားပေမယ့် မပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့က Multi factors လိုပြီး ဒေါ်စုဟာ အရေးကြီး factor တစ်ခုအနေနဲ့ပါတာပါ.. တခြား factors တွေ အနေနဲ့ (စကားလုံး ကြီးကြီးတွေသုံးရရင်) အမျိုးသားရင်ကြားစေရေး (စစ်တပ်နဲ့ peace ဖြစ်ဖို့)၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး (ဖက်ဒရယ်မူ ဘာညာပေါ့)၊ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးမှု (ပြည်တွင်းက ခရိုနီကော ပြည်ပက ဂုတ်သွေးစုပ်တွေရောကို ပညာသားပါပါနေရာချဖို့)၊ ပညာရေး ၊ ပြည်သူတွေ ရင့်ကျက်မှု…….. စတာ တွေ ဆိုပါတော့ (အဟွတ်..ဟွတ်..စကားလုံးတွေကလဲ နင် တာ)..အဲ့တာတွေလည်းအရေးကြီးတာပဲ.. အဲ့တော့ ကိုယ်တွေလို သာမန် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျ အဲ့ဒါတွေဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်လို့ လဲမရတော့ မနှောက်ယှက်မိရင်ကို မဆိုးလှဘူးယူဆရမှာပဲ.. ကိုယ်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံရေးသမားအားပေးတာလည်း အားပေးရမှာပဲ.. မေစု ဆိုလဲ မေစု၊ ဘစိန် ဆိုလဲ ဘစိန်၊ လေးလေးမန်း ဆိုလဲ လေးလေးမန်း ပေါ့.. ဒါပေမယ့် တခြား Multi factors လေးတွေရှိတာလဲ မမေ့နဲ့ပေါလေ..
ခြံပြောရရင်တော့ ကိုယ့် ခေါင်းပေါ်(ကိုယ့်လူ ခေါင်းပေါ်) အပြစ်ရောက်စရာရှိရင် တခြားအကြောင်းပြချက်တွေ ပေါ်လာပြီး သူများပ်ါတင်စရာရှိရင်တော့ ခေါင်းပေါ်တည့်တည့် အပ်ကျမတ်ကျ တင်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောချင်တာ အဓိကပါ (ကြိုကာထားလိုက်ပြီ ).. ဒါပေမယ့် အခုချိန်လိုမျိုး ကိုယ်နားတဝိုက်မှာ Information တွေ၊ Opinion တွေ၊ Like or Dislike စဉ်းစားစရာတွေ များလှတဲ့ အချိန်မှာ Linear စဉ်းစားတာထက် Multifactorial သဘော စဉ်းစားတာ ပိုအကျိုးရှိမလားဆိုပြီး မျှဝေတယ်ဆိုပါဆို့..
– ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းအား နည်းတာကို ဆွေးနွေးတာမှာ ဆရာဝန်တွေကို အပြစ်တင်တာထက် တခြားဘာအချက်တွေရှိသေးလဲ
– တခြားအစိုးရဌာန ဝန်ထမ်း တွေအပါ် အပြစ်မတင်ခင်လည်း သူတို့ဆီဘာအခက်အခဲရှိသေးလဲ..
– အမျိုးစောင့် ကြမယ်ဆိုလည်း ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ဘာသာရေးအပိုင်း နဲ့ နိုင်ငံရေးပိုင်း၊ ဥပဒေပိုင်း ကို ကွဲကွဲပြားပြားကြည့်မလား..
– နိုင်ငံရေးမှာလဲ ဒေါ်စု အင်္ဂလိပ်စာ မွှတ်နေအောင်ပြောတတ်ထာ.. ဘစိန်ကြီး ရိုးထာ၊ မွန်းငှားရောင်းစားမှာ စတာတို့ အလွန် ကိုယ်နိုင်ငံ ဒီမို ကိုယ်ဝန်သည် ဘယ်လိုချောချောမောမော မွေးလာမလဲ စဉ်းစားကြည့်မလား..
ဒါပေမယ့် မရဝူးဗျာာ.. ကျုပ်တို့က
– ဆရာဝန်တွေကို ကိုဖဲ့ချင်နေတာ
– ဘယ်သူ၊ဘယ်ဝန်ထမ်း အသုံးမကျတာတွေ့တွေ့ ဆဲလိုက်ရမှ ကျေနပ်မှာ
– မျိုးစောင့်ဥပဒေလဲ ဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူး.. မထောက်ခံတဲ့လူ မွတ်ဘာညာ။ ထောက်ခံတဲ့လူတွေ အစွန်းရောက် တဇောက်ကန်း ဘာသာရေးတကယ်နားမလည်တဲ့ ပိန်းတိန်းတိန်းတွေ ဘာညာ ပြောလိုက်ရမှ ပါးစပ်အရသာရှိတာ
– နိုင်ငံရေးလဲ ဘာမှ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေမပြောနဲ့.. တို့က မေစု မှ မေစု (or) ဘစိန် မှ ဘစိန်.. တိုင်းပြည်ကြီး ပီဇာ ဖြစ်ကာမှဖြစ် တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့တို့ တသားတည်းပဲ ဘာမှလာ မဝေဖန်နဲ့ ..
လို့ ဆိုလည်း…. မတတ်နိုင်ဘူးပလေ.. ဘုရားအဆူဆူ ဆုံးမတာတောင် မရလို့ ကိုယ်ကိုတိုင် အခုငုတ်တုတ်ကြီး အရေမရအဖတ်မရစာတွေ လျှောက်ရေးနေသေးတာပဲ..
.. ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ပြန်လာဆွေးနွေးပါဦး..
ကြိုဆိုပါတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့ နော့။
ကိုယ့်ကို တည့်တည့်ကြည့်ရေးသလားးးမှတ်ရအောင်ပဲ ကိုယ်အတွေးတွေက Linear ဖြစ်နေတာပါ။
ဝန်ခံပြီးပြီဆိုတော့ အင်မတန် ငြင်းကြတာပေါ့။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီလူတွေ လက်ချက် အသိသာကြီးဆိုတာပါကိုတော့ ဘာမှ Multifactorial နဲ့ မတွေးနိုင်ပါဘူးးး
ဒီ ပုတ်ထဲက ပဲကြီးနဲ့ ဂလို ယှဉ်ယှဉ်ပြီး အရေးခံ နေရတာကိုက ကိုယ့် ခေါင်းဆောင်ဘက်က နာပါတယ်။
မျှတတယ်။ မျှတချင်တယ် ဆိုတိုင်းလည်း နေရာတိုင်းမှာ ကောင်းတယ် မထင်။
ကျန်တဲ့အချက်တွေက ကြိုးစားတွေးလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကိုတော့ တွေးလို့မရသေးးးးးး (frankly speaking)
မျှတချင်တယ် ဆိုလို့ မောင်လေးတစ်ယောက်ပြောတာသွားသတိရတယ်။
((တို့က မေစု မှ မေစု bcoz ဘစိန် need to prove at least 20 more yrs to reach to ground level of Trust!!!)) တဲ့။
အဲခါကျတော့မှ ယုံကြည်ဖို့ စဉ်းစားပေးပါ့မယ်နော့။
.. စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ပြောဖူးတဲ့ အယူအဆလေးပဲ ပြန်သုံးချင်ပါတယ်.. စာရေးသူတာဝန်က တွေးစရာပေးဖို့ပဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကတော့ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပါ.. ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်လို့ရတာပဲ..
.. နောက်ပြီး ဘယ်သူ့ကို ယုံပါ.. ဘယ်သူ့ကို မယုံပါနဲ့.. ဘယ်သူကောင်းတယ် ဘယ်သူမကောင်းဘူး ပြောဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး.. ကိစ္စတစ်ခုကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မြင်နိုင်ဖို့ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်..
အယူအဆ လေးတွေ ကို သဘောကျတယ်ဗျ
.. ဟုတ်ကဲ့ဗျ.. မင်္ဂလာပါ..
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ အသားအမည်းဆုံး ယောင်္ကျားတစ်ယောက် says:
ကျနော်လဲ ပြန်လာမယ် ….
ကီးရော တန်ပို ရော မြင့်တယ် ..
ဒါပေသိ … ရေးထားတဲ့ ကိုယ့် အကြောင်းအရာကို နှိမ်ချတဲ့သဘော မဆောင် …
ဖတ်တဲ့သူတွေ ဒီစကားလုံး အမြင့်တွေ ကြောက်မှန်ဆိုးလို့ ဆိုတဲ့ ကန်ထားတဲ့ စကားစုတွေကြောင့်
အောင့် သပ် သပ်နဲ့ ဖတ်သွားလိုက်တယ် …
အင်းလေ … မြန်မာပေကိုး
.. အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားရင် Sorry ပါဗျ.. facebook မှာ တင်ဖို့ရေးထားတာကို သိပ်မပြင်ပဲ တင်လိုက်လို့ ဖြစ်ပါလိမ်မယ်..
ဆိုလိုတာက စာအရေးအသားကိုပါ …
အကြောင်းအရာ ပိုင်းကို ဝေဖန်ဖို့မရှိပါဘူး … အတွေးကောင်းကောင်းမို့ လေးစားပါတယ် …
ကိုယ့်ဆြာ ပြောချင်တဲ့ Linear နဲ့ Multifactorial တွေမှာ … အဓိကတည်ထားတာ fb က လေသိုင်းဆြာတွေ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် … ။
ဆိုတော့ အဲ့ကိစ္စဟာ တကယ့်တကယ့် တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ရေးမှာ ဘာမှ အလေးထားစရာ မလိုပါဘူး …
ဆိုလိုချင်တာက fb ကလူတွေကို အလေးထားစရာ မလို အားထားစရာ မလိုပါဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ Pro တွေ pro ကျကျ လက်တွေ့မှာ အခင်းအကျင်း ရှိဖို့ပါဘဲ …
ကျနော်လဲ fb သုံးပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ ကျနော့်ရဲ့ satification ဟာ fb နဲ့ ပတ်သတ်ပီး အတက်အကျ မရှိပါဘူး
ဒေါ်စုက ပညာတတ် right နဲ့ သွားနေတာ သူ့မှာ responsibility ရှိတယ်
တဖက်မှာ နိူင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်ဆင်းများ တချို့ political အရေကျို သောက်ထားသူတွေ ခုနပြောတဲ့
တာဝန်သိတတ်မှု တာဝန်ယူမှုရှိရင်/ရှိအောင် … ကျနော်တို့က တွန်းအားပေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ကြားမှာတောင် တာဝန်ဆိုတာ သိမှရှိတယ် ဆိုတဲ့စကားက တွင်ကျယ်နေသေးတာကိုး
ဒါကျနော့်ရဲ့ Multifactorial sences ပါ …
ဆိုတော့ နေရာတိုင်းမှာ contradiction နဲ့ neutrality ဆိုတာတွေ ရှိနေမှာမို့ … မီဒီယာဘက်ထက် … ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှု ဘက်ကနေ တွေးစေချင်မိပါတယ် … ( အများကို ပြောတာ )
အခုတော့ အခြေအနေကောင်းတခုတော့ လမ်းစတွေ့နေရတာ ၀မ်းသာစရာပါ …
မကြာခင် power balance ဖြစ်နိူင်ခြေတွေ ထွက်တော့မယ် ထင်တယ် ( အထင်)
ဆိုတော့ နိူင်ငံတနိူင်ငံရဲ့ အရေးဟာ fb လူတန်းစားပေါ်တွင် မတည်မှီကြောင်း … ( ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ မျှဝေနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကို အဓိကမဆိုလို ) ….
.. သေသေချာချာလေး ဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ.. အကိုပြောသလိုပဲ fb ပေါ်က တစ်ကြောင်းစွဲ သမားတွေကို အတွေ့များတာကြောင့်လည်း ဒီ Linear Multifactorial သဘောရေးချင်မိတာလည်း ပါ ပါတယ်.. fb ပေါ်ကလူတွေ ကိုယ့်စာ ဒီတစ်ပုဒ် ဖတ်မိမှာ မဟုတ်သလို ဖတ်လဲ ပြောင်းလဲလာမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး.. ဝါသနာအရ ဟိုတွေးဒီတွေးရေးထားတာ ကို ပြန် Share တဲ့ သဘောပါ.. ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမရှိလှပါဘူး..
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုသဘောကို ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး.. ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ဖက် ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်ရမယ့် အချိန်အခါတွေ ရှိတာပဲ.. ဒါပေမယ့် the whole picture တစ်ခုလုံးကို ကြိုးစာပြီးလည်းကြည့်ချင်နေမိတယ်.. မနိုင်ဝန်ထမ်းသလိုတော့ ဖြစ်နေတယ်..
.. Yes, bro..
အကြွေးလာ ဆပ်ပြီဗျို့ …
ကိုယ့်ဆြာ ရေ ဖြစ်ပုံက ဂလို ..ကိုယ့်ဆြာ ပိုစ့်ကို မန့်မယ် ဆိုပြောပြီး
ကျနော် ဖိုတို ၀ပ်ရှော့တခုနဲ့ တိုင်ပါတ်နေတာခည ..အလုပ် က ခွင့်လေးရက်ရလို့
အိမ်ကဝေးရာ လိမ့်လာသမို့ မိုဘိုင်းနဲ့ မြင်နေဖတ်နေ ..ပေမယ့် အတိုအပြတ် ဟာသလောက်
ရေးနေပြောနေပေမယ့် ဆြာသမား ပိုစ့် ကို မန့်ချင် ရေးချင်နေတာပါဗျာ …
ဂလိုဗျ …linear နဲ့ multifactiorial နဲ့ရဲ့ တင်ဆက်ပုံကလေးကို အင်မတန်လေးစားတာ တကြောင်းဗျ…
Bravo ပါဗျာ … တကယ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ် …
တကယ်က what if ? case ကို စစ် ချလိုက်ပြီး ..Stakeholder Analysis လုပ်ကြည့်ရင် ပေါ်ပါတယ်ဗျာ..
ကျုပ်တော့ သဂျိုင်ခီးနဲ့ တအိုးထဲ အကြော်မခံနိုင်လို့ တော်သေးဘီ…။
အင့် အင့် ..ဒါမိုးလေး
ဆြာဝန်တွေကို သမနိုင်ခဲ့သော် ဘယ်သူ ဘယ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးရှိ ဘယ်လိုအကျိုးယုတ်
ဆဲစာလေးများကို အရေးတယူပြုခဲ့သော် ဘယ်သူ ဘယ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးရှိ ဘယ်လိုအကျိုးယုတ်
ကိုကိုဝီ အောင်မြင်ခဲ့သော် ဘယ်သူ ဘယ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးရှိ ဘယ်လိုအကျိုးယုတ်
မေစု (or) ဘစိန် တယောက်ယောက် ထိပ်တက်ကပ်သော် ဘယ်သူ ဘယ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးရှိ ဘယ်လိုအကျိုးယုတ်
နောက်တဆင့် အနှီ ရလာဒ်ကတဆင့် ဘာတွေ ကွန်စီးကွင့်ဆက် ဖြစ်မလဲဆိုတာလေး ကို ထပ်သတ္တုချကြည့်ရင်…
၂ဆင့်ထဲပါဗျာ… အဲ့ဒလောက်ဆို ပေါ်မယ်ထင်ပါရဲ့ …။
.. အကြွေးလာဆပ်တာ အတိုးပါပေးသွားတာပါလား.. အကို့ ဒါမိုးလေး ကလည်း အတော် ဦးနှောက်စားမယ်..
ဇော်သန့် ဆိုဒေါ့ ..
စ ဆ ဇ ဈ ည .. အင်ဂါ …
ကျုပ်နဲ့ တည့်မှာ မဟုတ်ဘူး …
.. မဟာရာဇာ ဆိုတော့ ကြာသပတေး.. အင်္ဂါ ကြာသပတေးက တည့်တယ် မဟုတ်ဘူးလား..
ကျုပ်က အံစာတုံး ဆိုဒေါ့ …
တနင်းဂနွေဒါး …. ဟီးးးး
တနင်းဂနွေ နဲ့ အင်ဂါ တည့်ဘူးဒဲ့ … (ပြောတာ ကျားဖူးဒါ)
.. ကျွန်တော်က ကြာသပတေးဗျ..
မဟုတ်မှ လွဲရော နီ့ နာမည် အရင်းက
အရင်ဆုံး မင်္ဂလာ ပါ နော့.
နောက်ပီး ဟိုဘက်စွန်း ဒီစွန်း တွေ ဖတ်ရတာများနေလို့.
ကိုယ့်ဘာသာ ကြားချနေရချိန်မှာ ဒီပို့စ်ဖတ်ရတာ ကျေးကျေးဗျ.
.. အားပေးတဲ့ အတွက် လည်း ဇူးဇူး ဗျ..
တော်တော် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် တွေးထားတာပဲ ။
ဂဇက် က ကြိုဆိုပါတယ် ။
.. ဟုတ်ကဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေးရေးထားလို့ ကိုယ်ဟာကို ဘယ် Category ထဲ ထည့်ရမလဲတောင် နည်းနည်းစဉ်းစားယူရပါတယ်..
အတွေးကောင်း အရေးကောင်း အချိန်ပေးဖတ်ရမည့်သူ တစ်ယောက်တိုးလာပြီမို့…
မဇ္ဈိမပဋိပဒါ အလယ်လမ်းကနေ မျှမျှတတ ဆင်ချင်သုံးသပ်ဖို့ အားနည်းတာ…
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ အဓိကပျော့ကွက်ပါပဲ…
ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ လေသိုင်းကကြသူ အများသားဆိုတော့…
Multifactorial စဉ်းစားတတ်ကြဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတော့ လိုနေပြီ…
ပြောမည့်သာပြောရ… Mindset တွေက ခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီဗျ…
.. မင်္ဂလာပါဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ အယူအဆစွဲတွေတော့ တော့ ရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအစွဲတွေကြောင့် ကိုယ့်အတွေးအခ်ါကို ချုပ်ထားသလိုဖြစ်မှာ စိုးလို့ သတ်သတ်စီ ခွဲစဉ်းစားတဲ့သဘောပါ..
ဖတ်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးပို့စ်လေးပါ..။ ငြင်းစရာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးစရာကို ရှာဖို့ခက်အောင် သဘောကျပါတယ်။ ဒါက စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာ..။
အဲ… ထုံးစံအတိုင်း ဆွေးနွေးစရာ လမ်းစတစ်ခုပေါ်လာအောင် ကပ်ပြောရရင်တော့ အတိုက်အခံနဲ့အစိုးရကို စောင့်ကြည့်ဝေဖန်မယ် သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တဖက်ကို ကပ်ပေးမှ နည်းနည်းတရားမယ်ဗျ..။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ပွဲက အစကတည်းက မျှတတဲ့ကစားပွဲမှမဟုတ်တာ..။ ဂိုးကျောပေးကစားတဲ့ပွဲမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတန်းတူသတ်မှတ်ပြီး တိုင်းတာရင်တော့ အလယ်တည့်တည့်ရပ်နေရင်းကိုပဲ ဟိုဘက် (အစိုးရဘက်) ကပ်သွားတာပဲလို့ ခံယူတယ်..။
ဒါကြောင့် အစိုးရကို အကောင်းမမြင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေမှာလဲ သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာဘယ်လောက်နက်ခဲ့တယ်၊ ခုချိန်ထိ ဘယ်လောက်ပြန်ပြီး ကုစားပေးနိုင်နေပြီလဲ ဆိုတာတွေရယ် (ဆိုလိုတာက အကောင်းမြင်ထိုက်နေပြီလား???) ၊ အတိုက်အခံကို အကောင်းမြင်လွန်းတာလဲ သူ့သမိုင်း၊ သူ့ရပ်တည်ချက်၊ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ခိုင်မာလွန်းခဲ့လို့ဆိုတာရယ် (အဆိုးမြင်သင့်ပြီလား???) ကို မာတီဖက်တရယ်ကျကျလေးတွေးပြီး နားလည်ပေးပါ..။ မျက်ကန်းချစ်မရှိဘူးလို့ ငြင်းတာမဟုတ်ရပါ..။ ဟိုဘက်ဒီဘက် ရှိနေကြပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့… ဒါပေမဲ့ ပေါ့လေ…။
.. မနေခြည်ပြောတာ ငြင်းဖို့မရှိပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရေးထားတာ မျှတမှု၊ တရားမှု ရှုထောင့်က မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ ပြောချင်ပါတယ် (ဝန်ခံချင်ပါတယ်).. နောက်ပြီး ဟိုဖက်ဒီဖက် ကစားတဲ့ပွဲ၊ တဖက်ဖက်က အနိုင်ကစားရမယ့် ပွဲဆိုတာထက် ဦးတည်ချက်တစ်ခုခု ကိုကောင်းကောင်းသွားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်..
နောက်ပြီး နိုင်ငံရေးမှာ အမြဲတမ်း ရန်သူ အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေ ဆိုတာ မရှိ၊ အမြဲတမ်း အကျိုးစီးပွားသာ ရှိတယ် လို့ ကြားဖူးပါတယ်.. ကြိုက်တာမကြိုက်တာ နောက်ထား လက်တွေ့မှာတော့ အဲ့ဒီအတိုင်း သွားနေကြရပါတယ်.. အမြဲတမ်းအကျိုးစီးပွား ဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အဓိက ရည်မှန်းရာ၊ ဒါမှမဟုတ် မဖြစ်ချင်တဲ့ အန္တရာယ် လို့ပဲထားပါတော့.. ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည် က အဲ့ဒီသဘော အတိုင်း အမြဲတမ်း အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်အရေးအတွက် သွားနေတာပါ.. သမ္မတ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ သူမ သမ္မတဖြစ်မှ ဒီ အကျိုးစီးပွားကို ပုံဖော်နိုင်မှာမို့ပါ.. အဲတော့ သူမအနေနဲ့ လည်း အမြဲတမ်းရန်သူ၊ အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေလို့မထားပဲ လက်တွဲလို့ရတဲ့လူကို လက်တွဲပြီး လုပ်နေရတာပါ.. အဲ့ဒါလေးကို ကျွန်တော်တို့ သဘောပေါက်ဖို့လိုတာပါ.. အဓိက အကျိုးစီးပွားက တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့၊ အဓိက အန္တရာယ်က အာဏာရှင်စနစ် ဆိုတာ လူအများစုမြင်ဖို့လိုတယ်ထင်ပါတယ်..
အဓိက အန္တရာယ် နဲ့ အဓိက အကျိုးစီးပွားကို မြင်ရင် ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွှေမန်း စတဲ့ လူတွေကို အကောင်းမြင် မှာလား အဆိုး မြင်မှာလား ဆိုတာထက် ဘယ်သူနဲ့ လက်တွဲလုပ်လို့ရတယ် (တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက်)၊ဘယ်သူကတော့ အန္တရာယ် ကြီးတယ် စတာတွေက ပိုအရေးကြီးသွားပါတယ်.. (အန္တရာယ်ကြီးကို ရှောင်ဖို့ အန္တရာယ်လေး နဲ့တွဲ့သင့်တဲ့ အခါတွဲတာမျိုး)
ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ်စု ကြားမျှမျှတတ ရပ်ဖို့ တို့၊ အစိုးရ နဲ့ အတိုက်အခံ ကြား အလယ် တည့်တည့်ကရပ်ဖို့ တို့၊ ဘယ်သူဖက်မှ မပါပဲ ကြားနေ neutral လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ စာမဟုတ်ကြောင်းပါ..
(မနေခြည် ၏ comment အား ပြန်ပြောရင်း ထည့်ဖြည့်ချင်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြောသွားတာမို့ နည်းနည်းရှည်သွားပါတယ်..)
ရွာထဲကို ခုလို အတွေးကောင်း အရေးကောင်းတစ်ယောက်ရောက်လာတာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုပါတယ်။
ကျမတို့ကတော့ တစ်သက်လုံး Linear/Vertical thinking ပဲတွေးလာခဲ့တော့
မှန်ရာဝန်ခံရရင် Multifactorial/Horizontal/Lateral thinking မတွေးတတ်သလောက်ပါပဲ။
တွေးကြည့်ရမယ်လို့ သီအိုရီဖတ်မိသော်လည်း အကျင့်ကစွဲနေမိပါတယ်။
ကိုဇော်သန့်က ကိစ္စခပ်များများကို ခြုံငုံမိအောင် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
နောင်ရွာထဲမှာ တင်တဲ့ ပို့စ်တွေမှာ highlighted case တစ်ခုချင်းစီကို Multifactorial နဲ့ ဘယ်လိုဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုတာလည်း ကြည့်ချင်ပါတယ်။
.. ဟုတ်ကဲ့ဗျာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း ဆွေးနွေးဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်..
ဂဇက်မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်။
တွေးပုံခေါ်ပုံတွေကောင်းမွန်မှန်ကန်တိုင်း လုပ်နည်းကိုင်နည်းတွေ မှန်ကန်တိုင်း ရလဒ်ကောင်းမယ်လို့ ယူဆလို့ရပါသလား။ လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ တည့်တည့်သွားလို့မရရင် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့သွားရမှာ ဟုတ်ဖူးလား။ အခုက Transition ကာလ။ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ပြောင်းလဲလိုတဲ့ force ရယ်၊ အဲဒါကို ဆန့်ကျင်တဲ့ force ရယ်။ ဒီနှစ်ခု တန်ပြန်တိုက်ရင် တိုင်းပြည်ကျေပြီပေါ့။ အဲဒါ ဒီမိုနိုင်ငံဖြစ်အောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ယူတဲ့ ဆိုးကျိုးပဲ။ ပြောင်းလဲပုံနည်းစနစ်မမှန်လို့ ခုတင်ပြဿနာဖြစ်နေတာ။
သူတို့က တော်တည့်ဖြောင့်မှန်ဖို့ စဉ်းစားတယ်။ အောင်မြင်ဖို့ကို လျှော့တွက်တယ်။ ပြည်သူတွေဘက်က ပေးရမှာက ဘ၀တွေ၊ linear ပဲ တွေးတတ်သလားပြောရင် ခံရမှာပေါ့လေ။
စိတ်ထဲ ခံစားရတာတွေပြောတာပါ။ ကိုဇော်သန့် တင်ပြပုံကိုတော့ သဘောကျပါသည်။
.. တွေးခေါ်ပုံ၊ လုပ်ကိုင်ပုံတွေ ကောင်းတိုင်း ရလဒ်ကတော့ ကောင်းချင်မှကောင်မယ်ဗျ.. ကျွန်တော် အခု ရေးထားတဲ့ Multifactorial သဘောတရားလို တခြားအချက် (ကိုယ်ထက်အင်အားကြီးတဲလူက ဝင်ဖျက်၊ ကံဆိုး..စတာ) တွေလည်းရှိသေးတာကိုး..
..”တည့်တည့်သွားလို့မရရင် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့သွားရမှာ ဟုတ်ဖူးလား” ဆိုရင် ဟုတ်လိုက်လေဗျာလို့ ပဲပြောချင်တယ်.. အခု နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာ တည့်တည့်သွား(ဦးသန်းရွှေဆင်း> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်>တိုင်ပြည်ကောင်းစား) လို့မရလို့ ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ (ဦးသန်းရွှေဆင်း >နာမည်ခံ ဒီမိုအစိုးရတက် >ဖြေလျှောမှုစ >ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲစ >အတိုက်အခံနဲ့ ပါဝါ ထိမ်း>..>..> တိုင်းပြည်ကောင်းစား) ဆိုပြီး ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးသွားရမှာပါ..
ဒီမိုကရေစီပြောင်းတာ မြန်မြန်ပြောင်းရင် ကျွန်တော်တို့ အကုန် ကြိုက်တာပေါ့.. အာဏာရှင်ဆင်းပြီး ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်း အစစ်တက်လာတာ အကောင်းဆုံးပေါ့၊ အလိုချင်ဆုံးပေါ့.. ဒါပေမယ် လက်တွေ့အခြေအေနေအရ အဲ့လို မဖြစ်နိုင်လို့ ဇာတ်လမ်းရှည်နေတာပါ.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သာ ဦးသန်းရွှေဆိုလည်း ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲ.. အာဏာကို ကိုယ့်အတိုက်အခံလက်ထဲ တည့်တည့် ထဲ့ခဲ့ဖို့ထက် ကိုယ့် သြဇာနာခံဦးမယ့်လူလက်ထဲ အရင်ထဲ့မှပဲ.. ပြီး ကိုယ်သေပြီးခါလောက်မှ ပြောင်းခါမှပြောင်းပေါ့.. အဲ့တော့ အခြေအနေက သူခွင်ဖန်တဲ့ အတိုင်းကျန်ခဲ့ပြီ.. Complaint တက်လည်းမထူးဘူး.. ပြည်သူတွေအနေနဲ့က အပြောင်းအလဲကို မြန်မြန်နဲ့ အန္တရာယ် ကင်းကင်းဖြစ်အောင် တွန်းအားပေး၊ ဝိုင်းကူဖို့ပဲရှိတယ် လို့ ယူဆပါတယ်..
အစိုးရ၀န်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့.. ပေါ်လစီမိတ်ခါ.. ထိပ်ပိုင်းအများစုဟာ အောက်ခြေကတက်လာတဲ့ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ပဲ.. စစ်တိုက်ရလို့စစ်သားဖြစ်တာကနေ.. အုပ်စုနဲ့အာဏာယူထထိပ်နေရာဝင်ယူထားသူတွေကြောင့်.. ပေါ်လစီချတာ..၀န်ထမ်းကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တာမှာ.. အခြေခံအမှားတွေဖြစ်ကုန်တာလို့…။
အမျိုးစောင့်ချင်ရင်.. မြန်မာမတွေ.. အသက်၂၃မပြည့်ခင်.. မြန်မာယောက်ျားတွေ အသက်၂၇မပြည့်ခင်အိမ်ထောင်ပြုကြပါလို့…
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ.. မဏ္ဍိုင်ကြီးတခုလိုဝင်ပါနေတဲ့.. မဟနကိုဖျက်သိမ်းပါလို့..
အစိမ်းဝတ်.. အ၀ါဝတ်.. အဖြစ်ယူနီဖောင်းနဲ့.. လူထုလူတန်းစားမခွဲပဲ.. မြန်မာတိုင်းတန်းတူ(တန်းတူ) ဖြစ်ကြပါရန် ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်.. သူများလည်းတိုက်တွန်းပါလို့…
အမေရိကားကို.. “All men are created equal”
.. Sticky လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ.. ဒီမနက် ကိုယ့် post ကို အပေါ်ဆုံး မြင်လိုက်ရတာ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်..
.. ပြောသွားတာတွေအကုန်ထောက်ခံပါတယ်.. အသက် ၂၃၊ ၂၇ မပြည့်ခင် အိမ်ထောင် ပြုခိုင်းတာတော့ နောက်တာလို့ ယူဆပါတယ်..
.. နောက် ကျွန်တော့် post များမှာလည်း ဝင်ဆွေးနွေးပါဦး..
(မှားတယ် လို့တော့ ဆိုလို့မရပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ပြည့်စုံမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. အဲ့တော့ ပြဿနာကို တကယ် မဖြေရှင်းနိုင်တာ၊ ပြဿနာပုံပြောင်းသွားတာ၊ တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပါလာတာ တွေရှိနိုင်ပါတယ်….)
မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေပေးလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရင်း ပြဿနာတွေ ထပ်တက်ရင်းဆိုတာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ ဖြေရှင်းနည်း မမှန်တာပါ။
မှန်ကန်မျှတစွာမဖြေရှင်းနိုင်တော့ (ဖြေရှင်းနည်း မမှန်တော့)…..
တစ်ဖက်ကိုဖိရင်း နောက်တစ်ဖက်က ကြွရင်းနဲ့ သံသရာမဆုံးနိုင်ဖြစ်ကြရတယ်။
ပထမဦးဆုံးပိုစ့်မှာတင် စတစ်ကီအလုပ်ခံရတာမို့ ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုဇော်သန့်။
.. ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ point ကို သေချာ highlight လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတာလား၊ ကိုယ့် မကျေနပ်ချက်တွေ ပေါက်ကွဲကြ တုန့်ပြန်ကြမှာလား စဉ်းစားစေချင်တာပါ..
Linear စဉ်းစားတာထက် Multifactorial သဘော စဉ်းစားတာ ပိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ
များသောအားဖြင့်တော့ မဖွံ့ဖြိုးသေး(ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျ) တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း
Linearသမားတွေများနေသေးတော့ အခု လိုဆောင်းပါးလေးတွေနဲ့ အတွေးအခေါ် ဝေငှတာလည်း
.. အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်စာကို အချိန်ပေးဖတ်တဲ့ လူအများစုကလည်း ကိုယ့်ထက် ပြည့်ဝတဲ့လူတွေ ဖြစ်နေတတ်တော့ တခါတလေ ပစ်မှတ်နဲ့ ပစ်ချက် လွဲလွဲနေသလားခံစားမိပါတယ်.. ကျောင်းမှန်မှန်တက်ဖို့ အတန်းထဲမှာ ဆုံးမနေသလို ပေါ့..
ကျေးဇူးပဲ သူကြီးမင်း ရေ ။
အစိုးရကို ဌာနဆိုင်ရာတွေကို ………………တွေကို
ဘာလို့ဝေထန်လဲ ပြည်သူတွေက မကောင်းဘူးခံစား
ရပါများလို့ ခံရပါများလို့ ပေါ့ဗျာ။
နောက်ပိုင်းအတွင်းကျကျ သိမြင်ဖို့ထိ ပြည်သူတွေမှာ
ဆေးရုံဆိုပါတော့ ။လာတတ်တဲ့လူနာက ဆေးရုံရဲ့ အုပ်ချုပ်
ရေးပိုင်း စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်း အစရှိတာတွေ ကလူနာနဲ့
ဒီလိုပဲ ပြည်သူတွေ ဘက်ကရသင့်ရထိုက်တဲ့ အရာမျိုးတွေမှာ
ပြသနာက အစိုးရသိရမဲ့အပိုင်း ။ပြည်သူသိရမဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူး။
မြှင့်တင်ပေးရမဲ့တာဝန်က အနီးစပ်ဆုံးတာဝန်က မီဒီယာပဲ။
ပြည်သူဆိုတာကလဲ ဒါကောင်းတယ် မကောင်းဘူး တော်တန်ရုံတော့
တကယ်လဲကောင်းတယ်။ MPT က ကွန်နရှင်မကောင်းတာလဲ
ပြောတာ မကောင်းရင်ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာ MPT ပဲ။
ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲ အမျိုးစုံကို လူတွေသိစရာမလို
.. ပြည်သူ့ အမြင်ကိုယ်စား ပြုပြောသွားတဲ့ အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တင် ထားတဲ့ post ရဲ့ opposite အမြင်ဆိုပေမယ့် ကိုမင်းမင်းပြောသွားတာတွေကို ကျွန်တော် မငြင်းနိုင်ပါဘူး.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မီးပျက်တဲ့ အခါ EPC ကို ကြိမ်ဆဲချင်၊ မြောင်းရေမစီးရင် စည်ပင်ကို အပြစ်ဖို့ချင်တာပါပဲ၊ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ရသူဖြစ်တဲ့ အချိန် တွေ့ရတဲ့ အခက်ခဲ ကိုနားလည်လာတဲ့ အခါ တခြား profession ကို အပြန်အလှန် နားလည်ကြည့်မိတဲ့ သဘောပါ (တကယ်ကို ခိုး၊ဆိုး၊လာဘ်စားနေတဲ့ pure evil တွေကို မဆိုလိုပါဘူး).. နားလည်လာရင် သိပ်အစွန်းမရောက်တော့ဘူးပေါ့.. ဝေဖန်ရင် အပြစ်တင်ရင်လည်းအပြုသဘောဆောင်လာ မလားပေါ့..
အခုဟာကျတော့ ကိုယ့် (ကိုယ့် profession၊ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်) ကိုဝေဖန်လာရင်ကြတော့ “အော် ဒါ ပြည်သူ့အခွင့် အရေးပဲ” ဆိုပြီး (ကိုမင်းမင်း အခုပြောထားသလို) နားလည်မပေး နိုင်ကြဘူး.. ကိုယ်က ဝေဖန်ရမယ့် အချိန်ကျတော့ “ငါ ပြည်သူကွ ဝေဖန်မယ်၊ အဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်” ဆိုတာမျိုးဖြစ်ကြတာ တွေ့လို့ပါ.. အဲ့ဒါတော့ သိပ်မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်..
အားလုံးက ​ပြောချင်​တာ​တွေကို​ပြောပြီးဖြစ်​လို့အထူး​တော့ ​ပြောစရာမကျန်​​တော့ဘူး
တဆက်​တည်း​ပြောရရင်​ ဒီရွာရဲဓ​လေ့အရ အခါအား​လျော်​စွာ
.. အရေကတော့ ထူပြီထင်တာပါပဲဗျာ.. ငြင်းခုန်တာကြောင့်တော့ စိတ်ဆိုး စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး.. နောက်လည်းအားပေး ဆွေးနွေးပါဦး..
ရွာထဲ ကို ဒီလို Post လေး နဲ့ ဝင်လာတဲ့ အတွက် ဂျေးဇူးဒင်ဘားဒယ် ကိုဇော်သန့်။
ကျွန်မတို့ ကလဲ မင်းကလားဘား။
ရွာထဲကို တွန်းပို့ တဲ့ အစ်မ ကိုရော ပေါ့။
ပထမဆုံး Post ကို စတစ်လုပ်ခံရတာ မို့ ဂုံးယူးဘာဒယ် လို့ လဲ ပြောပါရစေ။
သာမာန်တွေးနေပုံ တွေကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး စဉ်းစားဖို့ အချက်အလက် လေးတွေ နဲ့ ရေးပြထားတာ မှတ်သား စရာတွေ ဆင့်ပွါးတွေး စရာ တွေ အများကြီးပါဘဲ။
အားလုံး ကို လက်ခံနိုင်ပါတယ် လို့ ပြောလိုက် ရင် ဆက်ပြောစရာမလို ပွဲသိမ်းသွားမှာ စိုးလို့ တစ်ခြား အမြင် ကနေ ဝင် ဆွေးနွေးပါရစေ။
ကျွန်မ ကတော့ အစွန်း တွေ ကိုလဲ ဟိုဘက် ဒီဘက်ကူးလိုက်၊ အလယ်မှာလဲ နေကြည့်လိုက် နဲ့ ပုတ်သင်ညို လို အရောင်ပြောင်းတတ်သူမို့ပါ။
လူတွေ ဟာ Linear thinking ကနေ Multi-factorial thinking ပြောင်းတိုင်း တကယ်ဘဲ ကောင်းနိုင်/မနိုင် ၊ ဘယ်ဟာ က ပိုပြီး ကောင်းတယ်/အရေးပါတယ် လို့ ဆိုနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဆွေးနွေးချင် တာပါ။
ဝန်ခံထားပါရစေ။ တတ်လို့ ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပါ။ သိချင်လို့ ဆွေးနွေးတာပါ။
ကျောင်းတုန်း က စာထဲ မှာ Linear and Non-Linear thinking ဆိုပြီး Management ဘာသာတစ်ရပ်ထဲ မှာ ကြားဖူးခဲ့တယ်။
Non-Linear က ကိုဇော်သန့် ရဲ့ Multi-factorial သဘောဆောင်ခဲ့မလားဘဲ။
ကျောင်းစာဆိုတာ ကျောင်းမှာထားလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မ မို့ ပြောတာတွေ တစ်လွဲ မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကျရင် ဒါဟာ အတွေးသစ် ကို Creative လုပ်ထားတာ လို့ သာ တွေးလိုက်ပါတော့။
ပြီးရင် အမှန်ကို ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
“Linear Thinking” ထဲ မှာ
ဒါဟာ မမှားပေမဲ့ အင်မတန် ရိုးလွန်း တဲ့ ခပ်ချာချာ အတွေး လို့ ဆိုတာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ မှ Logic ကို စရတာ မဟုတ်ပေဘူးလား။
ဒါပေမဲ့ မြေကြီး ရေစိုတိုင်း မိုးရွာတာ မဟုတ်။ ဒါမျိုး တွေပေါ့။
ပြောရင်တော့ ကလေးတောင် သိပါတယ်။
ဒီလို စဉ်းစားရာမှာ အဆင့်တစ်ခု ကနေ စစ်ပြီး အဖြေ ကို ယူ၊ အဲဒီကနေ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် သွားရတာ မို့ Linear တဆက်တည်း၊ တိုက်ရိုက် လို့ ကိုဇော်သန့် ပြောသလိုပါ။
Linear ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်က ဒီမှာပါဘဲ။
အခြေခံ (Starting Point) မှာထဲ က အယူလွဲ သွားရင် တောက်လျှောက် မှားရောဘဲ။ မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကောင်းကွက်ကတော့ အစ မှာသာ မှန်ခဲ့ ဟိုလို ဒီလို ဝေဝါး မနေဘဲ လမ်းမှန် ကို မြန်မြန် နဲ့ မှန်မှန် မရောက်နိုင်ပေဘူးလား။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ထဲ မှာ ကျွန်မ အကြောင်းတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပေးရင်း Excel Spreadsheet Software ထဲ က Management Analysis အထောက်အကူပြု Tool တစ်ခု “What if” ဆိုတာ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီလို If တွေ ပါလာတာကို Logical thinking လို့ ဆိုနိုင်မယ် ထင်ရဲ့။
ဒါဖြစ်ရင် ဒါလုပ်၊ မဟုတ်ရင် ဟိုလို လုပ် ဆိုတာမှာ အသေအချာသွားရမဲ့ လမ်းကို ပြပေးရတာ။
သဘောကတော့ Program တွေထဲမှာ If တွေ အများကြီး လုံ နိုင်သမျှ လုံ အောင် ထည့်ထား ပေးပြီး သုံးရမဲ့ User ကို လွယ်ကူစေအောင် လုပ်ထားပေးတာပေါ့။
အဲဒီမှာတော့ creative thinking တီထွင်စဉ်းစားရတာ တွေ မပါတော့ ဘူး။
လူတွေ ကို ဒီဟာမှန်နိုး ဟိုဟာမှန်နိုး ဒွိဟ မပွါးစေတော့ဘူး။
ဦးတည်ချက်ကို ပျောက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ က အနှောက်အယှက် မဖြစ်တော့ဘူး။
“Non-Linear Thinking” ခေါ်မလား “Multi-factorial Thinking” ခေါ်မလား
အဲဒါကျတော့ စကထဲက Direction တစ်ခုမက မြင်နေရတာ။ အဲဒါတွေက တိကျတဲ့ Structure ထဲမှာ မဟုတ်တာမို့ အားလုံး ဟာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေမှာချည်းဘဲ။
ကိုယ့်တစ်ကိုယ်ဘဲ လမ်းရွေး ရမယ် ဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိ။ ကြိုက်ရာ ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေး။ မှားလဲ ပြန်ဆုတ်။ ပြန်ရွေး။
ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့အစည်း မှာ “Multi-factorial Thinking” တွေသာ ဆိုရင် နဲနဲ ကနေ များများ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုလာမယ်။ Brainstorming အတော်လုပ်နိုင်မှ၊ လုပ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ သူတွေ မှ အလုပ်ဖြစ်မယ်။
မဟုတ်ဘဲ “Multi-factorial Thinking” တွေ ဟာ ငါ့ပြောတာ အမှန် သမားတွေ ချည်း ဘဲ ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ အန္တရာယ်ဘဲ။
သူ့ရဲ့ အလှ ကတော့ Brainstorming ကနေ ရှုဒေါင့်မျိုးစုံ က စဉ်းစားထားနိုင်တဲ့ ရလာဒ် မို့ လက်တွေ့ မှာ ပစ်တိုင်းထောင် ဖြစ်မှာ အသေအချာဘဲ။
ကျွန်မ အထင်တော့ လူတွေ ရဲ့ ပင်ကိုယ် ဗီဇထဲမှာ ကို “Linear” လား၊ “Multi-factorial” လား ဆိုတာ ပါပြီးနေပြီလားမသိ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တစ်ချို့ က Creative လုပ်ဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ဘဲ။
တစ်ချို့ က Creative လုပ်ရတာကို လုံးဝ ကို မကြိုက်။
ပုံစံချထားတာ ကိုဘဲ လုပ်ချင်တယ်။
နှစ်ဖက်ကို မျှအောင် တော့ အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးနိုင်မလားဘဲ။
“Multi-factorial Thinking” နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဟာသ လို ပြောလေ့ရှိတာလေး။
လူတစ်ယောက်က သူဟာ အတွေးတွေ ကို ဟိုဘက် ဒီဘက် ဘက်စုံ တွေးလွန်း လို့ သူ့ဟာသူ Alzheimer’s disease ရနေ သလားလို့ တောင် သံသယ ဖြစ်လာ ဆိုဘဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မ ကိုဇော်သန့် ကို မေးခွန်း လေး ပြန်မေးပါရစေ။
ကိုဇော်သန့် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း မှာ လူတွေ ကို ခန့် ရင်
“Multi-factorial Thinking” သမား တွေချည်းဘဲ ခန့်မှာလား???
“Linear Thinking” သမား တွေ ကိုပါ ခန့်မှာလား???
အဲဒီ လူ နှစ်မျိုး နှစ်စားထဲ က ဘယ်အချိုး ကို ပို များမှာလဲ???
ဘယ်သူ ကို ဘယ်လို နေရာမျိုးမှာ ခန့်မှာလဲ???
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုး မှာ “Multi-factorial Thinking” သမားတွေ ပို လိုပြီး
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုး မှာ “Linear Thinking” သမားတွေ အားများဖို့ လိုလဲ ???
ကို ဇော်သန့် အဖြေ က နေ
ကျွန်မတို့ ချစ်သော မြန်မာပြည် ရဲ့ ဒီနေ့လိုနေတဲ့ နေရာ လေး တွေ မှာ ဖြည့်ကြည့်ပေးလို့ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
အရီး မေးတာကို ဇော်သန့် ဘယ်လိုဖြေမတုန်း ကြည့်ချင်တယ်။
ဘိုလိုပစ် ပြီး ဂါးဖီး ဖြစ်သွားတာတုန်း။
ဂါး ၂ ဂါး ရှိတယ်။
စာလုံး အကြီးနဲ့က ကဖက်ကက်။
စာလုံး အသေးက ကျနော်။
အိမ်က ခေါ်တဲ့ နစ် နိန်းတွေက တူနေတာ စကားစပ်မိလို့ ပြောင်းဖြစ်သွားတာ။
အရီးတော့ မှားမှာစိုးလို့ ကြိုပြောထားတာ။
.. ပထမဆုံးပြောချင်တာက အသေအချာ ဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အရီး ဆွေးနွေးသွားတဲ့ အချက်တွေ များတော့ အကုန်လုပ် ပြန်ဆွေးနွေးနိုင်အောင် စာရွက်ပေါ်မှာ နုတ်စ်လေးတို့ ပြီးမှ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်.. ကျန်သွားရင် ပြန်ပြောပေးပါဦး..
(၁) Linear thinking ကနေ Multi-factorial thinking ပြောင်းတိုင်း တကယ်ဘဲ ကောင်းနိုင်/မနိုင် ၊ ဘယ်ဟာ က ပိုပြီး ကောင်းတယ်/အရေးပါတယ် လို့ ဆိုနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ
အခြေအနေပေါ်မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်.. အထူးသဖြင့် စဉ်းစားသူရဲ့စွမ်းရည်ပေါ့.. ဥပမာ ကိုယ့် ကလေးကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင် ဒါကောင်းတယ် ဟိုဟာ မကောင်းဘူး.. ဒါလူဆိုးတွေ ရှောင်၊ ဟို လူကောင်းလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပေါ့.. ရိုးရိုးပဲတွေးခိုင်းရမှာပဲ .. နည်းနည်းကြီးလာရင်တော့ Multi စဉ်းစားတတ်မှ ကောင်းမယ်ထင်တယ်.. ချွင်းချက်ဆိုတာတွေ၊ paradox သဘောတွေ၊ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံ ရမယ့် အခါတွေ.. စသည်ဖြင့် ပေါ့.. ဥပမာ ပေးဖို့ စဉ်းစားလို့ ရမှ ထပ်ရေးလိုက်ပါမယ်.. ယျေဘူယ အားဖြင့်တော့ Multi တွေးတတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပိုရင်ကျက်လိမ်မယ် လို့မြင်ပါတယ်..
(၂) ကျောင်းစာထဲတော့ ဘယ်လိုပါတယ် မသိဘူး.. ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တွေးမိတာ ရေးတာဆိုတော့ တကယ့် Academic စာတွေနဲ့ ကိုက်လိမ်မယ် မထင်ဘူး..
(၃) “အဲဒါနဲ့ မှ Logic ကို စရတာ မဟုတ်ပေဘူးလား။”
အတွေးမှာ Linear သဘောနဲ့ စကြတာပါပဲ.. ကျွန်တော့် post ထဲမှာလည်း ဆေးပညာ တိုးတက်လာပုံကို ဥပမာပေးရေးထားပါတယ်။ မိုးရွာလို့ မြေကြီးစိုတယ် ဆိုတာ မမှားပေမယ့် မြေကြီးစိုတာ မိုးရွာလို့ ဆိုရင်တော့ မှားတဲ့ အခါ မှား ပါလိမ့်မယ်.. တခြားဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိတာကိုး.. အဲ့တော့ Multi စဉ်းစားရင်တော့ အဖြေမှန်ပါဖို့ အခွင့်ပိုများတာပေါ့..
(၄) ” ကောင်းကွက်ကတော့ အစ မှာသာ မှန်ခဲ့ ဟိုလို ဒီလို ဝေဝါး မနေဘဲ လမ်းမှန် ကို မြန်မြန် နဲ့ မှန်မှန် မရောက်နိုင်ပေဘူးလား။”
အဲ.. အဲ့ဒါတော့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ point နဲ့ နည်းနည်းလွဲသလို ရှိနေတယ်.. အရီးပြောသလိုဆို အစမှန်ခဲ့ ရင် Linear နဲ့ သွားတဲ့အခါ မြန်မြန်မှန်မှန် ရောက်ပြီး Multifactorial သွားရင် ဝေ့ဝိုက်သွားရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်.. အဲ့ဒါတော့ လက်မခံချင်ဘူး Multifactorial သဘောက ဟိုဝေ့ဒီဝိုက် စဉ်းစားတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရောက်ဖို့ အဓိကအချက်အပြင် တခြားဘာ အချက်တွေပါ အရေးကြီးလည်း စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် လို့ ရေးချင်တာပါ.. Linear စဉ်းစားရင် အဓိက အချက် (ကိုယ်ဓာတ်ကျရာ) ပဲမြင်ပြီး Multi စဉ်းစားတော့ တခြားအချက်တွေပါ မြင်ပြီး ပိုအားဖြည့်ပေးလို့ရတာပေါ့..
(၅) “အဖွဲ့အစည်း မှာ “Multi-factorial Thinking” တွေသာ ဆိုရင် နဲနဲ ကနေ များများ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုလာမယ်။ Brainstorming အတော်လုပ်နိုင်မှ၊ လုပ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ သူတွေ မှ အလုပ်ဖြစ်မယ်။
မဟုတ်ဘဲ “Multi-factorial Thinking” တွေ ဟာ ငါ့ပြောတာ အမှန် သမားတွေ ချည်း ဘဲ ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ အန္တရာယ်ဘဲ။”
ဒီအပိုင်းလည်း နည်းနည်းတော့ ပြောစရာရှိတယ်.. Multi thinking သမားသာ တကယ်များရင် ညှိနိုင်းဖို့လိုလာ တာတော့ လက်ခံပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ညှိနိုင်းရ ပိုလွယ်မလားလို့.. ဘက်စုံစဉ်းစားတော့ တူတဲ့ အချက်တွေ ပိုတွေ့လာမယ်.. မတူတဲ့ အချက်တွေ ရှိရင်တောင် တူတဲ့ အချက်တွေ ပေါ်အခြေခံ ပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ပိုကောင်းမလားပဲ.. Multi တွေးတော့ ငါပြောသမျှ အမှန်ဆိုတာ ချည်း သိပ်လုပ်မယ် မထင်ဘူး.. Linear သမားအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ သဘောညီတဲ့ အခါ တစ်သံတည်းပဲ.. ဘာမှ ညှိစရာမလိုဘူး.. သဘောမညီ ရင်တော့ နှစ်ခြမ်းကွဲမယ် ထင်တယ်.. သူကလည်းဒါဆိုဒါ.. ကိုယ်ကလည်း ဟိုဟာ ဆိုဟိုဟာ..
(၆) တွေးခေါ်ပုံကတော့ ပင်ကိုဗီဇရော ကြီးပြင်းပုံရော တခြား (Multi ) ဟာတွေရော ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်..
(၇) အလုပ်ခန့် ရင်တော့ “စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမ” ဆိုပြီးပဲ ရွေးလိုက်ချင်တယ်.. မေးခွန်းကို တည့်တည့် ဖြေရရင်တော့ ကိုယ်လွှဲထားရမယ့် ကိစ္စတွေ ကိုင်မယ့် လူဆို Multi သမား၊ ဒီအတိုင်းခိုင်းဖို့ဆိုရင်တော့ သိပ် ဂျီမများတော့ ပါဘူး.. Linear ရော Multi သမားရောထည့် ရမှာပဲ.. ဒါပေမယ့် Linear သမားတွေချည်းများနေမယ့် ရုံးဆိုရင်တော့ မအုပ်ချုပ်ချင်ဘူး.. ကိုယ်ကို ချစ်ရင် ကောင်းတယ်.. မချစ်ရင်တော့ စိတ်ညစ်စရာဖြစ်မလားပဲ..
ပြန်ဆွေးနွေးပေးတာလေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဘက်စုံရှုဒေါင့်စုံ က ကြည့်ရင်း အဖြေ ထွက်မလားလို့ပါ။
ကိုဇော်သန့် ပြောတဲ့ “Multi-factorial Thinking” ပေါ့။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အသားလွတ် ဆဲဆို ပြောနေသူတွေ ကို ဝေဖန်ရရင်တော့
အဲဒီလို လူတိုင်း (ဘယ်ဘက်က မဆို) ဟာ ဘာ Thinking မှ မရှိသူ တွေ လို့ ကျွန်မ တော့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
အနဲဆုံး Linear Thinking ဘဲ ဖြစ်ဦး။ သူ့မှာ ဘာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ Logic ပါပါသေးတယ်။
ဒီလို ဘာ Thinking မှ မရှိ (တနည်း) ရှိဖို့ လဲ တွေးခေါ်နိုင်မှု မရှိသေးတဲ့ (ဒါမှမဟုတ်) တမင် ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေ သာ အကြောင်းမဲ့ ဆဲဆို နေတာပါ။
ဒီလိုသူမျိုး တွေ ကို Linear Thinking သမားတွေ လို့ သတ်မှတ် လိုက်ရင် အချက် တစ်ခုပေါ်စွဲပြီး သတ်မှတ် လိုက်တာ မို့ အဲဒါက ဘဲ အခြေ မခိုင်လုံတဲ့ Thinking ဖြစ်မနေဘူးလား။
ကျွန်မ ပြောချင်တာကတော့ “Multi-factorial Thinking” က ကောင်းပါတယ်။
လူတွေ မှာ အားကောင်းတဲ့ Logic Thinking တွေ များလာချင်ပေါ့။
ဘာ Thinking မှ အားမကောင်းသေးချိန်မှာ အဆင့်ကျော်ပြီး သွားလို့ ဖြစ်မဖြစ်တော့ ကျွန်မ လဲ မပြောတတ်ဘူး။
တစ်ချို့ အရာတွေက ရှင်းရှင်းကြီး မြင်နေရတာ ကို တစ်ခြား သွားလှည့် စဉ်းစားလိုက်ရင် လိုရင်း ကို မထိဘဲ ဖြစ်မှာလဲ စိုးရပါတယ်။
ဒီတော့ လိုတာ ကို လိုချိန် မျှ သုံးနိုင်ရင် တော့ အကောင်းဆုံး ရလာဒ် ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ် မြန်မာပြည် မှာတော့
တိုင်းပြည် မွဲနေတာ ၊ ကလေးတွေ ပညာ မတတ်တာဟာ ချစား နေ တဲ့ အစိုးရကြောင့် လို့ တဲ့တဲ့ မပြောလို့မှ မရတာလေ။
အစိုးရ အဖွဲ့ မှာ နေတယ်။
အာဏာ နဲ့ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ တွေ ကို အေးဓားမြတိုက်တယ်။
တကယ်လုပ်နိုင်သူတွေ ကို နေရာ မပေးရဲဘူး။
ဒီတော့ ရသမျှ ကုတ်ကပ် နေရတယ်။
သူတို့ ကို ထိနိုင်မဲ့ အကြောင်း အတိုက်အခံ မှန်သမျှ မရ ရသလို ကလိမ် ကကျစ်မျိုးစုံ သုံးပြီး ဖယ်တယ်။
ဥပဒေ ဆိုတာ သူတို့ ကြိုက်သလို သုံးဖို့ ဘဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါဟာ ကျွန်မ ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ လောဂျစ် မဟုတ်ဘူး။
ကမ္ဘာ့ ချစား နိုင်ငံတိုင်း မှာ သုံး နေတဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေပါ။
အဲဒါတွေ က အမြဲမှန် နိယာမ တွေပါ။
အဲဒီ အမြဲမှန် နိယာမ ကို ရှင်းမဲ့ အမြဲမှန် နည်း ကတော့ “မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး” ပါဘဲ။
စနစ် မရှိသေးခင် လူကိုဘဲ အားကိုး ရမှာမို့ တစ်ခြား သွယ်ဝိုက် စဉ်းစားစရာ နည်းလမ်း မမြင်နိုင်သေးပါ။
ဒီတော့ ကိုဇော်သန့် စကားဘဲ ပြန်ယူသုံးရရင် အစိုးရ အဖွဲ့ထဲမှာ “မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး” အတွက် Multi-factorial မစဉ်းစားနိုင်တဲ့ သူတွေ ကို အရင်ဖယ်ပစ်လိုက်ဖို့ ကို Linear Thinking လေးနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါကျ တကယ် လုပ်သင့် တာ ကို ရှင်းရှင်း မလုပ်နိုင်ဘဲ နည်းမကျတဲ့ ဟိုဟာ ဒီဟာ စဉ်းစား နေတာတွေ က မြန်မာပြည်မှာ ပိုပြီးများ များ နေသလားလို့ပါ။
ဒီတော့ နာမယ်ပျက် တွေကို မဖယ်နိုင်သေးဘူး။
ဒီ အစိုးရ ကို ယုံလို့ မရသေးဘူးဘဲ။
လူတွေ ကို နွားတွေ ကို ကြိုးရှည်ရှည် နဲ့ လှန်ထား သလိုပါဘဲ။
ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ထုတ်မကြော်ညာ ရဲ တဲ့ လူတွေ လက်ထဲ မှာ မှန်ကန်တဲ့ တရားဥပဒေ ရဖို့ ဝေးနေမှာဘဲ လို့ စဉ်းစားရင် Linear Thinking ဘဲလား ကိုဇော်သန့် ရေ။
ကိုယ် လိပ်ပြာလုံ ရင် အမှန် ကို မပြောရဲ စရာရှိလား။
မြေကြီးထဲ က ရွှေအိုးကြီး တွေ တွေ့လို့ အင်မတန် ချမ်းသာနေတာပါပြော။
ကိုဇော်သန့် နားမှာ အင်မတန် အငြင်းသန်တဲ့ Multi-factorial thinking သမား တွေ ချည်း သုံးယောက်လောက်ဘဲ ထားကြည့်။
Linear တွေ လာပါလို့ ပြောကိုပြောစေရမယ်။
သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ ဂျို ပါတာပါဘဲ ကိုဇော်သန့်ရေ။
အမှန်ကတော့ အစွန်းလွတ် နေနိုင်သူတွေ က တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
Until then ???????
ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာ လို့ မြှောက်မြှောက်ပေးသူ ရှိနေလို့ မရရအောင် ကတ်သပ် ငြင်းနေတာပါ ကိုဇော်သန့်ရေ။
.. တမင် ဆန့်ကျင်ပြောတယ်လို့ မယူဆပါဘူး.. အသေးစိတ်ဝင်ဆွေးနွေးပေးတာ အဖိုးတန်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ အချက်တွေထဲက ထောက်ပြစရာလေးတွေ ပိုပေါ်လာသလို၊ ပြန်ရှင်းလို့ ရတာဆိုလည်း ကျွန်တော့်ဘက်က ဖြည့် ပြောခွင့် ရတာပေါ့..
.. ကျွန်တော့် စာတစ်ပုဒ်ထဲက လူအားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်မိဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. အဲ့ဒါကြောင့် ဘာ Thinking မှ မရှိတဲ့ လူတွေ၊ အသားလွတ် ဆဲဆိုနေတဲ့ လူတွေက အခုစာစုရဲ့ focus ထဲမှာ မပါပါဘူး.. တိုင်းပြည်ကိစ္စ၊ ဘာသာရေး နိုင်ငံရေး ကိစ္စ အထွေထွေကို တွေးတော့ ကြသုံးသပ်ကြတဲ့ အထဲမှာ မှ Linear စဉ်းစားပုံ နဲ့ Multi စဉ်းစားပုံ၊ အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမျဉ်းပါးပါးလေးကို အာရုံထားရေးထားတာပါ.. ပေါင်း အလုပ်လုပ် လို့ရတဲ့ လူတန်းစားနှစ်ခု အတွေလေးနည်းနည်းကွာသွားတာနဲ့ ငါကဒီဘက်က မင်းကတော့ ဟိုဘက်ကဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်တာ အဓိကပါ..
ဘာ Thinking မှအားမကောင်းသေးရင် မှန်ကန်တဲ့ Linear Thinking ပေါ်ရောက်အောင် အားပေးရမှာ မှန်ပါတယ်.. အဲဒီမှ တဆင့်မှ Multi စဉ်းစားတတ်အောင် အားပေးရမှာပေါ့.. အခု ကျွန်တော်ရေးထားတာက ဒုတိယအပိုင်းက စပြောသလိုတော့ ဖြစ်နေမယ်.. အပေါ်မှာ ပြောထားသလိုပဲ focus အကုန်လုံး လိုက်မလုပ်နိုင်တာတော့ ဝန်ခံပါတယ်..
အစိုးရပိုင်း အသုံးမကျတာ၊ ဒီလူတွေ ဖယ်ဖို့လိုတာ၊ တကယ်စေတနာရှိတဲ့လူ တကယ် အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ လူတွေ တက်လာဖို့လိုတာ ကတော့ Linear စဉ်းစားတာဖြစ်ဖြစ် Multi စဉ်းစားတာ ဖြစ်ဖြစ် သိသိသာသာကြီးမြင်ရပါတယ်.. (Multi စဉ်းစားလို့ အဲ့လောက်ထင်းနေတာကြီး မမြင်တော့ဘူး လို့ မဟုတ်ပါဘူး) (မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေကလည်းသက်သက်ရှိပါတယ်).. အဲလို ပြင်ဖို့လိုနေတာကို ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ လို့စဉ်းစားရင်တော့ Multi နဲ့ Linear စဉ်းစားတာ နည်းနည်းကွာသွားပါတယ်.. ဒီလူတွေ မကောင်းဘူး ဆင်း၊ ဒီလူတွေ ကောင်းတယ် တက် လို့ Linear စဉ်းစားတာ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အမှန်ဆုံးပါ.. ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မှာ ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ် မဖြစ်၊ Timing မှန် မမှန်၊ ဘယ်သူတွေ ကိုယ်ဖက်ဆွဲ ခေါ်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေ ကအန္တရာယ် ကြီးသလဲ၊ တခြားဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ စတာ တွေတော့ Multi စဉ်းစား ပြီးမှ ပဲ သွားလို့ ရမှာပဲ (လူတိုင်း အဲ့လို စဉ်းစားတတ်မှာတော့ မဟုတ်တော့ Pro တွေ အဲ့လို စဉ်းစားတတ်ပြီး အဲ့တာကို ကိုယ်တွေက နားလည်ပေးရင်ကို မဆိုးပါဘူး)
.. ဟိုဟာ စဉ်းစား၊ ဒီဟာ စဉ်းစား လိုရင်း မရောက်တဲ့ လူတွေကတော့ တွေးခေါ်တာ အားနည်းတဲ့ လူတွေလို့ပဲ ပြောရမယ်.. Linear Multi နဲ့ သိပ်မဆိုင်ဘူး..
သူဟာနဲ့ သူဂျိုပါတော့ တော့ အမှန်ပဲ.. အဲ့ဒါကြောင့် စိတ်ထားကောင်းဖို့ ပထမလို့ ပြောထားတာ.. အငြင်းသန်မသန် ကတော့ လူပေါ်မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်.. Linear ငြင်းသမားဆိုရင်တော့ ငြင်းရပိုခက်မယ်ထင်တယ်..
Have we unfreeze it 100%. No.
Is itabottom-up operation? No
Have we reached to the bottom line? No
Is there adequate inf to personnels who have Know How’s? No
Is thereaclear new form to be refreeze ? No
All the stakeholders are ready foradramatic change? No
No more resistance forces? No.
Enough budget, enough personnels, enough exp: enough supporters, enough media coverage, enough time schedule or frame. ?? No.
All we need is justalittle patience. But.
1) no more moonwalk
2) no more shuffling
Just do it. But take this pace with balance and timing.
ဒီနေ့ FB မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ပိုစ့်လေး သဘောကျတယ်။
အရင်က ဆင်ဆာတွေဖြတ် လွန်းလို့ အော်ခဲ့ကြတယ်..
အရင်က ဘတ်စ်ကားကျပ်လို့ အော်ခဲ့ကြတယ်
အခု ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ မီးပွိုင့်ကျပ်လို့ အော်နေရတယ်
အရင်က ဖုန်မကိုင်နိုင်လို့ လူတန်းမစေ့လို့အော်ခဲ့ကြတယ်
ခု ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ လိုင်းမကောင်းလို့ အော်နေရတယ်
အရင်က နုိုင်ငံရေးသမားတွေ ထောင်ထဲထည့်လို့အော်ခဲ့ကြတယ်
အခု ထောင်ကထွက်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အချိုးမကျ လို့ ပြန်အော်နေရတယ်
အရင်က လမ်းပေါ်မှာ အော်တယ် အခု အွန်လိုင်းမှာ အော်ကြတယ်
Htet Aung Kyaw F.B မှ…။
သဘာဝ ဟာ သဘာဝ ပါ။
သဘာဝကျ အောင် ဝင်အော် (မှားလို့ ဝင် ဟောင်) ပေးနေရတာပါလေ။
.. မအော်ကြနဲ့ လို့လဲ ပြောရခက်သားဗျ..
ထိထိမိမိရှိတဲ့……စကားလုံးတွေပါပဲ KO R GA….
ဖေ့ဘုတ်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး ဒီဂဇက်မှာရော အခြား စာနယ် မဂ္ဂဇင်း မီဒီယာအားလုံးမှာ အမြင် အယူအဆ မတူတဲ့ နှစ်ဖက်ဟာ တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကို တဖက်စောင်းနင်း ရေးတယ်ပြောတယ်လို့ဘဲ ပြောကြမှာပါ၊
ဒါပေမယ့် စာရေးတဲ့သူတွေ ရေးနေလို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေရှိနေကြသလို စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ ရှိနေကြလို့ စာရေးတဲ့သူကလည်း ရေးဖြစ်နေကြတာပါ။ အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုရာ သဘောပါဘဲဗျာ။
ဂဇက်မြို့ မန်ဘာဖြစ်လာခြင်းအတွက်တော့ ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပါတယ် မင်္ဂလာပါဗျ။
သဂျီးတို့များ ဂဇက်ရွာကနေ မြို့ချဲ့ပြီး ကနဦးဝင်လာတဲ့မန်ဘာကို မြို့ဝင် လက်ဆောင်ပေးချက် (ပရိုမိုးရှင်း) ကတော့ လျှင်ပါပေ့ “ပို့စ်လေးကြီုက်လို့.. အပေါ်ခဏတက်ကပ်ထားလိုက်တယ်..´´ တဲ့။
အနော်လဲ ကြိုက်တာလေးတွေ့လို့ ကူးလာတယ်ဗျို့ ….
Pathi Zaw Min Tun (FB)
.. ဘာပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး..
… Linear စဉ်းစားတာထက် Multifactorial သဘော စဉ်းစားတာ ပိုအကျိုးရှိမလားဆိုပြီး …
အကျိုးတ၇ားကို ရရှိစေတဲ့ မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ အေ၇းကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တရားသဘောနဲ့ပြောရရင်တော့ သမ္မာဒိဌိ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအကျိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားဆင်ခြင် နိုင်ဖို့အရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် မိုးရွာရင်ရေစိုမယ်။ ရေစိုနေတာ မိုးရွာလို့ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အဖြေမျိုး ဘာကြောင့်ထွက်ရလဲ?
အဓိက ကေ၇ဘာကြောင့်စိုတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုလိုချင်တာလား?
နှပ်ကြောင်းပေးထားတဲ့ နိမိတ်ပြမေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုလိုရာအဖြေကို ရဖို့ကျုံးသွင်းမေးမြန်ခြင်းလား။
.. Nature ပြောသွားတာတွေ လက်ခံပါတယ် .. နောက်ဆုံးပိုင်း ပြောသွားတာတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး..” နှပ်ကြောင်းပေးထားတဲ့ နိမိတ်ပြမေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုလိုရာအဖြေကို ရဖို့ကျုံးသွင်းမေးမြန်ခြင်းလား” ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို မေးတာလား.. အဲ့လိုမေးတာ ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ဖူးဗျ လို့ပဲငြင်းရလိမ်မယ်.. ယျေဘူယသဘော ဥပမာပေးထားတာပါ.. လက်တွေမှာ ဒါနဲ့ မကိုက်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါတယ်..
logic နဲ့ မေးတတ်တဲ့ဟိုဒင်းတွေကိုကြုံလို့စောင်းပြောတာပါ။
လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာ လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်း တွေ၊ ညီညွတ်မှု တွေကို ဒီလို လူ့အတွေး တွေ က ပံ့ပိုး နိုင်ရင် ကောင်းမယ် တွေးမိပါတယ်။
ဒီ အတွေးတွေမရှိလို့ စည်းကမ်း တွေ၊ ညီညွတ်မှု တွေ နဲနေတာလား။
အတွေးတွေကဘဲ ပြန့်လွန်းလို့ စည်းကမ်း တွေ၊ ညီညွတ်မှု တွေ နဲနေတာလား။
တကဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်း ထိတ်တန်း ဆရာကြီး တွေ တောင် လက်တွေ့မှာ တကယ် Apply လုပ်ဖို့ ခက်နေကြတာ မဟုတ်လား။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ သတ်မှတ် နိုင်သူနောက် ကိုတောင်မှ စည်းစည်းလုံးလုံး မလိုက်နိုင်ကြတာ မြင်နေရပြီဘဲ။
တစ်ခါတစ်ခါ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ Linear ဖြစ်ကို ဖြစ်မှ စည်းကမ်းရှိပြီး ညီညွတ် မှာလား ဆိုပြီး တွေး မိလိုက်လို့ပါ။
.. ဟုတ်ပါတယ် လူ့အတွေးတွေ ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြုဖို့ သာဖြစ်သင့်တာပါပဲ..
.. စည်းကမ်းတွေ၊ ညီညွတ်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးတာတော့ နိုင်ငံရေးစနစ်ပျက်သွားတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ မှာ တွေ့နေရတာပဲ (ကိုယ်တွေဆီမှာလို အာဏာရှင်စနစ်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့)..
.. တကယ့် အတွေးအခေါ် ထိပ်တန်းဆရာကြီး တွေ ဆို လက်တွေ့ Apply မလုပ်နိုင်ရုံတင်မက အသတ်ခံ(သေမိန်ပေးခံ)ရတာ၊ မိစ္ဆာဒိတ္ထိ (God ကိုအကြည်ညိုပျက်အောင်လုပ်လို့) စွပ်စွဲခံရတာ တွေတောင်ရှိတာပဲ.. ကိုယ် ရေးထားတာ ဒ်ီလို ထိပ်တန်းအတွေးအခေါ်တွေ မဟုတ်တော့ အဲ့ အန္တရာယ်တွေ တော့ မရှိလောက်ပါဘူး လို့ထင်တာပဲ.. Apply လုပ်မရလည်း နေပါစေတော့..
.. ခေါင်းဆောင်ကောင်း နောက်ကို ကောင်းကောင်းလိုက်ဖို့ ကတော့ ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်းကို မြင်တတ် ကြဖို့၊ သူ့ စေတနာ အနစ်နာခံမှုတွေကို သဘောပေါက် ကြဖို့ လိုတာပါ.. ဒီခေါင်းဆောင် နောက်ကို လိုက်ရင် ငါတို့ လိုချင်တာတွေ ပြေလည်မှာပဲ ဆိုတဲ့ Linear အတွေးနဲ့ လိုက်နေကြတာဆိုရင်တော့ တချိန်ကျရင် ခက်ကုန်မယ်.. အဲ့ဒီသဘောကို ဥပမာလေး ပေးကြည့်မယ်ဗျာ.. ဥပမာ နာမည်ကို Linear Trap လို့ပေးလိုက်မယ်.. အဆင့် တစ်ဆင့်ချင်းတက်သွားကြည့်မယ်..Trap ဆိုတဲ့ သဘော အတိုင်း အချိန်နောက်မကျခင် ရုံးထွက်နိုင်မှ ရလိမ်မယ်..
(၁).. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အစစ နိမ်ကျနေတာ အာဏာရှင် အစိုးရကြောင့်လို့ Linear တွေး တွေးကြမယ်.. အမှားပါဘူး.. အဓိက ကသူတို့တရားခံပဲ
(၂) အခု အစိုးရပိုင်းက ပြင်ဆင်မှုတွေ စနေပြီ.. ဒါပေမယ့် ပြဿနာ တွေ မပြေလည်သေးဘူး.. ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်ခဲတွေ ကျန်သေးတယ်.. အဲ့တော့ ဒါလည်း အစိုးရမကောင်းတာပဲ လို့ Linear တွေး တွေးကြမယ်.. ဒါလည်း မမှားသေးပါဘူး.. ဒါပေမယ့် တခြားအချက်တွေ (ပြုပြင်မှုအတွက် အချိန်လိုတာ၊ လူထုပါဝင်မှုလိုတာ၊ ပြည်တွင်း အင်အားစုအချင်ချင်းပြေလည်မှုလိုတာ…) လိုသေးတယ်ဆိုတာ Multi တွေး တွေးကြည့်ရင်တော့ မြင်လို့စရလာပါပြီ..
(၃) ပြဿနာတွေ ပိုပြေလည်ဖို့ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်.. ဒီ မစွံတဲ့ လူတွေ ဆင်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တက်လာရင် အစစအရာရာ ပိုအဆင်ပြေလာမှာပဲလို့ Linear တွေးပဲ ဆက်တွေးမယ်.. ဒါလည်း ယျေဘူယအားဖြင့် မှန်နေဆဲ ပါပဲ.. ဒါပေမယ့် တစ်ခြားအချက်တွေကို စ သတိထားမိဖို့ကောင်းပါပြီ (သူမ ဦးဆောင်လည်းပဲ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းဖို့ အချိန် လိုတာ၊ ပြည်သူတွေ စိတ်ရှည်မှု၊ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ စတာတွေ လိုတာပါပဲ).. အဲ့ဒါတွေကို Multi တွေး တွေးပြီး သဘောမပေါက်ရင် နောက်တစ်ဆင့် ကျပြဿနာတက်ပါပြီ..
(၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တန်ခိုးရှင် မဟုတ်တဲ့ အတွက် လူထုတစ်ဦးချင်းအခက်ခဲ ကို ချက်ချင်းပြေလည်အောင် လုပ်လို့မရပါဘူး.. အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ လူအားလုံး စိတ်ကျေနပ်မယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ မလွယ်ပါဘူး..အပေါ် (၃)အဆင့် မှာ ဒေါ်စု တက်လာရင်ဖြင့် ကိုယ့် အခက်ခဲ ပြဿနာတွေ ပြေလည်လာမယ် လို့ Linear တွေး တွေးထားကြတဲ့ လူတွေ လက်တွေ့ မှာ ပြဿနာတွေ ချက်ချင်း မပြေလည်သေးရင် ဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာမလဲ.. ဒေါ်စုလည်း မထူးပါဘူး ဆိုတာတွေ၊ ငါတို့ကတော့ အားကိုးလိုက်ရတာ ခုတော့ ဆိုတောတွေ၊ အရင် အစိုးရတုန်းကမှ ဘယ်လိုလေး ပြေလည်သေးတယ် ခုကျ ဆိုတာတွေ Linear တွေးတွေ လာပါလိမ့်မယ်.. လက်ရှိမှာကို လက်ပန်းတောင်း ကိစ္စ၊ ဘင်္ဂလီ ကိစ္စတွေကို ဥပမာ ကြည့်လို့ရပါတယ်.. ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်းကို လည်းမသိ (ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာပဲသိ)၊ တွေးတာလည်း တစ်ကြောင်းစွဲ ဆိုခက်ကုန်ရော.. အဲ့ အချိန်ကျမှ တခြားအချက်တွေ လိုသေးတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နေတာမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အချိန်လိုတယ်၊ ပြည်သူတွေပါဝင်ဖို့ စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်၊ အရင်အစိုးရ ချန်ခဲ့တဲ့ ဆိုးမွေတွေ ထည့်တွက်ဖို့လို တယ် စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် ကို စထိမှ Multi တွေးဖို့ စပြောရမယ့် အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်..
ကျွန်တော် ပြောတာ အကုန်ဒီသဘောဖြစ်မယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး.. အရီး ပြောသလို ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ခေါင်းဆောင်ကောင်း လို့မြင်ပြီး စည်းလုံးကြရင် အဆင့် (၃) လောက်ထိ Linear တွေးရင်တောင်မှ (၄) မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နားလည်ပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမယ့် လက်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက် လည်း ကောင်းကောင်း လိုက်ကြမှာ မဟုတ်၊ Multi လည်းစောစောတွေးကြမှာ မဟုတ်လို့ အဆင့် (၄) က အနည်းနဲ့ အများတွေရဖို့ရှိတယ်လို ထင်ပါကြောင်း..
ကိုဇော်ခန့်ကို သမဒရုံးညွှန်မူး မှိုဗူးဇော်ဌေး ကလောင်ခွဲလို့ ပြောနေဂျတယ်… အဟုတ်လား.. လေစားပါဒယ် မှိုဗူးဂျီး…
စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ ကိုဇော်သန့်လို့ ရေးလိုက်ထှာ….
.. မှုးဇော်ကြီးလား.. ဟာ.. သူကကျွန်တော့် ဂျူနီယာဗျ.. သူရေး ရေးနေတာတွေမှာ ကျွန်တော့် အာဘော်တွေ အများကြီးပါတယ်..